IBHOLA YE-EROTIC ENGAQHELEKANGA ERICHMOND IRHOXISIWE NGOSUKU OLUNGAPHAMBI KOMSITHO-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Ibhola ye-Erotic engaqhelekanga e-Richmond irhoxisiwe ngosuku olungaphambi komsitho
I-Exotic Erotic Ball kunye ne-Expo yarhoxiswa ngolwe-Sihlanu, ngolunye usuku ngaphambi kokuba amawakawaka abantu ababukeleyo bavele ngoMgqibelo ebusuku kwindawo engasemanzini yase-Richmond kwi-bash enemixholo yabantu abadala.
Ukuthengiswa kwetikiti okungonelanga, ukugqithiswa kweendleko ezingalindelekanga kunye nemiba yokusebenza ekhokelela ekurhoxisweni, utshilo umkhulumeli wesiganeko uChristopher Buttner.
Umsitho weentsuku ezimbini, ozichaza njengenxalenye yeMardi Gras, inxalenye ye-burlesque kunye nenxalenye yekonsathi ye-rock, yayisendleleni yokuvula i-expo yayo yeemveliso kunye nemiboniso nge-4 p.m. NgoLwesihlanu kwi-Ford Craneway. Kodwa eyona nto yayitsala umdla yayilusuku lwangoMgqibelo lwangaphambi kweHalloween olunokhuphiswano lwesinxibo, umculo ophilayo, abadanisi abangaqhelekanga, imiboniso nokunye.
UButner uthe akazi ncam ukuba mangaphi amatikiti athengisiweyo, kodwa abanini bamatikiti baya kufumana imbuyiselo ukuba balandela iinkqubo zamakhadi abo ebhanki. Umthombo wamapolisa ubeke inani kumawaka ambalwa abantu.
Abalandeli babelane ngokuphoxeka kwabo kwiphepha le-Facebook lomsitho nakwi-Twitter, njengoko ilizwi lisasazekile ngoLwesihlanu.
Umhlali waseFairfield u-Enrique Vega udade wabo wamthengela itikiti njengesipho. Wayengazange abekho ngaphambili, kodwa abahlobo ababekhe bahamba ngaphambili baye babika ukuba babeyonwabile. WayenePhantom yesinxibo seOpera elungele ukuhamba.
Ndandinobusuku kwaye ndikhangele phambili kuyo, uVega uthe.
Umnyhadala oneminyaka engama-30 ubudala ubanjelwe kwiindawo ezahlukeneyo kwelinye icala leBay njengeSan Francisco, iCow Palace yaseDaly kunye nakwiTreasure Island. Ibhola itsale abantu abamalunga ne-9,500.
Umsitho utshintshele eRichmond kulo nyaka. I-Craneway incinci, inomthamo we-5,000, kodwa iindleko eziphezulu ziphantsi, kusho u-Buttner. Abaququzeleli baceba ukuba nenqanawa yaseSan Francisco Belle kwindawo engasemanzini ukuze kudaleke umthamo wabantu abongezelelweyo abangama-2,200.
U-Buttner uthe akanakuchaza iindleko zesiganeko okanye amanye amanani eedola. Lo ngunyaka wokuqala abaququzeleli beyirhoxisile ibhola.
Umnyhadala awuzange uthengise amatikiti aneleyo okuhlawula iindleko, ezibandakanya iimali ezinkulu zokhuseleko ezibekwe sisixeko, umthombo wamapolisa uthe.
Ekuqaleni isebe belijonge ukusebenzela amapolisa angamashumi amabini anesihlanu okhuseleko, kodwa ngoku liceba ukugcina asixhenxe ukuze acacise ngokurhoxiswa kwabantu abafikayo kwaye abancedise ukubabuyisela kuhola wendlela.
UManejala weSixeko uBill Lindsay uthe isixeko siyazimisela iimfuno ezithile zokhuseleko loluntu, ulawulo lwezithuthi kunye neminye imiba engqonge imisitho.
Kuyinto eqhelekileyo ukuba izixeko zibuyiselwe iindleko kuba isisiganeko sabucala, utshilo uLindsay. Akuqhelekanga ukuba abahlawuli berhafu bancedise. Abavelisi baqhele ukuhlawula loo nto.
U-Buttner wayengenalo ulwazi malunga nezicwangciso zesiganeko zonyaka ozayo.
Umbhali wabasebenzi uKarl Fischer ufake isandla kweli bali.